I-China Fused Silica Flour Umkhiqizi Nomhlinzeki | I-Dinglong
Ufulawa wethu we-silica owenziwe wenziwe nge-silica ephezulu, kusetshenziswa ubuchwepheshe obuyingqayizivele bokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. Ukuqina kwevolumu ephezulu, ukunwetshwa kwevolumu ephansi nokuhlanzeka okuphezulu kukwenza kube into ewusizo kakhulu futhi esebenza ngezindlela eziningi. Ufulawa wethu we-silica ohlangene utholakala kuzo zombili izinhlayiya ezijwayelekile nezingokwezifiso nokwabiwa.
Izakhiwo zokunwetshwa kokushisa okuphansi zinikeza ukumelana okuphezulu kokushisa kokushisa
I-Dinglong Fused Silica Flours isetshenziswa ngendlela eshelelayo futhi iphakathi kwekhwalithi ephezulu kakhulu etholakala emakethe. Imifucumfucu yethu ye-silica ehlanganisiwe yenzelwe ukuvumelana kusuka ku-batch kuya ku-batch, ukukusiza ukuthi ukhiqize izinto ngezinga eliphakeme lokunemba okulinganiselwe. I-Dinglong fused silica powders yimifucumfucu ephezulu esetshenziselwa inqubo yokutshala imali yokutshala imali, kanye nokusetshenziswa kwe-refractory ne-electronics. Idizayini yethu yokuguqula iziko isiza ukuvimbela isihlabathi se-silica eluhlaza ukuthi singcoliswe ngesikhathi sokulungiswa - okuholela kumkhiqizo ophelile oyi-99.98% emsulwa.
I-Dinglong fused silica powders iyatholakala kuzo zombili izinhlayiya ezijwayelekile nezingokwezifiso nokwabiwa, futhi ochwepheshe bethu bazosebenzisana nawe ukwenza uhlelo lwakho lokusebenza lusebenze kahle. Ngoba isisekelo ngasinye sinezidingo ezihlukile, lawa mpuphu we-silica ahlanganisiwe akhiwe ngokuguquguquka okwakhelwe ngaphakathi futhi angalungiswa ngezidingo ezithile zohlelo lokusebenza. Izinhlayiya ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Lezi zinto zokwakha ezihlanganisiwe zenziwa esikhungweni esiqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Sihlanganiswe ngokuphelele ukuqinisekisa ukulawula okuphelele kwekhwalithi nobuqotho bezinto zethu ze-quartz kusuka emayini kuya kumakhasimende. Sineminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni ekuklameni nasekukhiqizeni izinto ze-quartz ezisika onqenqemeni, futhi siqhubeka nokusebenza ukuthuthukisa izinto zethu ze-quartz ngokubambisana namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica Powder ehlanganisiwe
Olandelayo: I-Silica Lump ehlanganisiwe